Abavelisi kunye nabaxhasi beDijithali yoluhlu lweDijithali kunye nabaThengi baseChina baTshintshiselwano lwedijithali kunye neeSenzi zoLuhlu lweeFektri zeFektri
Transmitter kunye neeSensors Series
IPH woluvo wedijithali
Woluvo Digital Orp
Digital Ion woluvo Selective
Isenzi woluvo lokuSebenza kwidijithali
Idijithali ye-Oxygen Sensor yedijithali
Intsalela yedijithali eseleyo yechlorine
Izinto eziQinisekisiweyo eziDibeneyo zedijithali (uSludge Concentration) woluvo
Digital Turbidity woluvo
Idijithali yeChlorophyll Analyzer
I-Digital Blue-Green Algae Analyzer yedijithali
Isivamvo seCOD yedijithali
pH / ORP / ION Uthotho
Umatshini wokuhambisa i-pH / ORP
Ion Transmitter / Ion woluvo
Ukuqhuba / i-TDS / ukuhlala kwakhona / kuthotho lweTyuwa
Isidlulisi sokuhambisa ityuwa esine-Acid
Ukunyibilika Oxygen Series
Ukuhanjiswa kweFluorescent Oxygen Transmitter
Ipolografi ichithwe uMthumeli weoksijini
Umatshini wokuhambisa umbane we-Oxygen oNcinci
Izinto eziQinisekisiweyo eziMisiweyo (uSludge Concentration) / Uluhlu lweTurbidity
Izinto eziQinisekisiweyo eziMisiweyo (uSludge Concentration) Transmitter
Transmitter Transmitter / Turbidity woluvo
Uthotho lokujonga iintsholongwane emanzini
Umthumeli weChlorine eseleyo
I-Chlorine Dioxide Transmitter
Ukuchithwa kweOzone Transmitter
Imitha yeNqanaba loTywala
Imitha yojongano lwedreyini
Emva kweNkonzo yokuThengisa
Ukuqhuba kunye ne-TDS kunye nokuHlala kunye neTyuwa
Uthotho lweeNgqokelela zeIon
Uthotho lwe-PH kunye ne-ORP
I-Chlorine eseleyo kunye ne-Chlorine Dioxide kunye ne-Ozone enyibilikisiweyo
Uluhlu lweeTurbidity kunye neZinto eziMisiweyo eziMisiweyo
ZONKE Iindidi zemveliso
CS6602D Digital COD woluvo
Isivamvo se-COD sisivamvo se-COD sokungenisa i-UV, esidityaniswa namava amaninzi esicelo, ngokusekwe kwisiseko sokuqala senani leziphuculo, hayi kuphela ubungakanani obuncinci, kodwa kunye nebrashi yoqobo yokucoca yokwenza enye, ukuze ufakelo ilunge ngakumbi, ngokuthembeka okuphezulu.
CS6603D Digital COD woluvo
CS6604D Digital COD woluvo
I-CS6604D COD probe inezinto ezinokuthenjwa kakhulu ze-UVC ye-LED yokulinganisa ukukhanya. Obu buchwephesha buchanekileyo bunika uhlalutyo oluthembekileyo noluchanekileyo lwezingcolisi zendalo zokujonga umgangatho wamanzi ngexabiso eliphantsi nolondolozo olusezantsi. Ngoyilo oluxineneyo, kunye nembuyekezo yokuhlangana kobunzima, sisisombululo esigqibeleleyo sokubeka iliso ngokuqhubekayo kumthombo wamanzi, amanzi aphezu komhlaba, umasipala kunye nogutyulo lweshishini.
T6601 COD Uhlalutyo olukwi-Intanethi
Ukubeka iliso kwi-Intanethi kwi-COD kukujonga esweni umgangatho wamanzi kwi-Intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Isixhobo sixhotyiswe nge-UV COD sensors. Ukubeka iliso kwi-COD kwi-Intanethi kukubek 'esweni okrelekrele kakhulu kwi-Intanethi. Inokuxhotyiswa ngenzwa ye-UV ukufezekisa ngokuzenzekelayo uluhlu olubanzi lweppm okanye mg / L. Sisixhobo esikhethekileyo sokufumanisa umxholo we-COD kulwelo kulondolozo lokusingqongileyo kwimizi yogutyulo.
I-Blue-Green Algae kwi-Intanethi yokuHlola i-T6401
I-Industrial Blue-Green Algae Online Analyzer sisixhobo esiku-intanethi sokujonga umgangatho kunye nokulawula isixhobo esine-microprocessor. Isetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zamandla, ishishini le-petrochemical, i-elektroniki ye-metallurgical, imigodi, ishishini lephepha, ukutya kunye nomzi mveliso weziselo, ukhuselo lwendalo kunyango lwamanzi, i-aquaculture kunye namanye amashishini. Ixabiso leBlue-Green Algae kunye nexabiso lobushushu kwisisombululo samanzi zijongwa ngokuqhubekayo kwaye zilawulwa.
I-Chlorophyll kwi-Intanethi yokuHlola i-T6400
I-Industrial Chlorophyll Online Analyzer sisixhobo esilawula umgangatho wamanzi kwi-Intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Isetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zamandla, ishishini le-petrochemical, i-elektroniki ye-metallurgical, imigodi, ishishini lephepha, ukutya kunye nomzi mveliso weziselo, ukhuselo lwendalo kunyango lwamanzi, i-aquaculture kunye namanye amashishini. Ixabiso leChlorophyll kunye nexabiso lobushushu kwisisombululo samanzi zijongwa ngokuqhubekayo kwaye zilawulwa.
Isilumko sokuSebenza kwe-CS3742D
Yenzelwe amanzi amsulwa, iBoiler Amanzi, isiXhobo soMbane, Amanzi ajiyekileyo.
Kulula ukunxibelelana ne-PLC, i-DCS, iikhompyuter zolawulo lweshishini, abalawuli beenjongo ngokubanzi, izixhobo zokurekhoda ezingenamaphepha okanye izikrini zokuchukumisa kunye nezinye izixhobo zomntu wesithathu.
Digital Turbidity woluvo kunye Ukucoca oluzenzekelayo
Umgaqo woluvo lobushushu lusekwe kukudityaniswa kwe-infrared edibeneyo kunye nendlela yokukhanya ethe saa. Indlela ye-ISO7027 inokusetyenziselwa ukuqhubekeka nangokuchanekileyo ukumisela ixabiso le turbidity. Ngokwe-ISO7027 itekhnoloji yokukhanya esasaza kabini engachaphazeleka yichromaticity ukumisela ixabiso lendlu yoxinaniso. Umsebenzi wokucoca ngokwakho unokukhethwa ngokwemeko yokusetyenziswa. Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; Ukufakwa okulula kunye nokulinganisa.
I-CS7800D Isenzi se-Turbidity kwi-Intanethi
CS7920D ukuhamba kwe-Intanethi kwi-Turbidity Sensor
Uhlobo lokuntywila kwi-Intanethi
Idilesi Ukwakha i-6, i-166 ye-Mindong Road, iPudong yeSithili esitsha, i-Shanghai, i-China ngo-201209
Ifowuni +86 21 61621082
Ph woluvo Electrode, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isilumko seChlorophyll, UkuCwangciswa kwamanzi okuQiniswa okuManzi okuManzi, Umgangatho waManzi kuMgangatho wokuGada, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo,